FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA TIBETANA TERRIER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Tibetana Terrier
Chelsey ilay Tibetana Terrier volondavenona
Lisitry ny alika mifangaro Tibetana Terrier
Ny Tibetan Terrier dia alika antonony sy refy mifandanja. Ny loha dia salantsalany amin'ny habeny ary mijanona kely. Mainty ny orona. Mihaona ao anaty hety ny hety, hety miverina na manaikitra ny haavony. Ny kaikitry ny hety mifamadika dia ny faritra anatiny amin'ny nify ambany no mikasika ny ivelany amin'ny nify any ambony. Ny maso mainty volontany dia lehibe sy malalaka. Ny sofina miendrika V dia pendant, mihantona eo anilan'ny loha. Ny topline dia avo lenta ary ny tratra dia manana brisket izay mipaka hatrany an-tampon'ny kiho. Volom-borona tsara ny rambony, miforitra ambony lamosina. Ny tongotra aoriana dia somary lava kokoa noho ny tongony aloha. Esorina ny lalàma indraindray. Ny palitao indroa manana palitao malefaka sy volon'ondry miaraka amin'ny palitao lava lava, mahitsy mifangaroharo, tsara ary be. Ny palitao dia misy loko sy lamina rehetra.
Alika be herim-po, manan-tsaina, feno fanoloran-tena, antonony. Mamy, be fitiavana ary malemy paika, ny Tibetana Terrier dia velona, ​​malefaka ary mahafinaritra, miaraka amin'ny fahakingana ary koa fiaretana. Alao antoka fa an'ity alika ity ianao mpitarika fonosana . Alika avela hitantana ny seho, mino fa izy ireo alpha ho an'ny olombelona ho tonga fanahy iniana ary mety hanomboka hihoatra noho izay irinao, rehefa manandrana mifehy zavatra izy ireo, milaza aminao izay tian'izy ireo hataonao. Ny hoditr'ity karazana ity dia lalina toy ny sirenà miakatra. Na dia manao watchdog tsara aza izy ireo, dia mila lazaina ny Tibetana izay tsy maintsy hilazana zavatra betsaka fa ampy izay. Aorian'ny fampandrenesany anao voalohany dia teneno ny alikao mba hangina. Afaka miatrika zavatra eto ianao. Raha mino ilay alika fa izy no mpitondra anao fa tsy ny mifanohitra amin'izay dia mahazo sosotra rehefa ilainao izy . Mazava ho azy fa avela handao ny mpanaraka azy ny mpitarika ny kitapo, na izany aza tsy avela hiala ny mpitarika ny fonosana ny mpanaraka azy. Hahomby amin'ny ankizy raha toa ka mpitarika ny fianakaviana manontolo. Raha vantany vao manomboka mametra-panontaniana momba ilay baiko ilay alika dia mety tsy hatokisana amin'ny ankizy kely izy ary mety ho voatokana amin'ny olon-tsy fantatra rehefa manandrana manombatombana an'io andraikitra io amin'ny olombelona. Mety hanandrana mifehy ny alika hafa koa izy. Tibetana izay manana mpitarika tsy miovaova, matoky ary tsy miova ary manana ny ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana dia ho namana mahafinaritra sy mahatoky fianakaviana. Any Etazonia, ny rà mandriaka Tibetana Terriers dia samy hafa amin'ny halavany sy palitao. Diniho amin'ny mpiompy momba ny tetirazana fako manokana.
Hahavony: 14 - 17 santimetatra (36 - 43 sm)
Ny haavon'ny maina amin'ny 17 santimetatra na ambanin'ny 14 santimetatra dia heverina ho lesoka.
Milanja: 18 - 30 pounds (8,2 - 13,6 kg)
shiba inu afangaro amin'ny pug
Ity karazana ity dia mety ho mora tohina. Mora voan'ny atrophy retinalie mivoatra (PRA) sy displasia hip.
Ny Tibetan Terrier dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Tsy mihetsika intsony izy io ao anaty trano ary ampy ny tokotany kely.
Ny Tibetan Terrier dia manana angovo betsaka ary tokony hanana fotoana mahazatra mihazakazaka ny alika. Ankoatr'izay dia mila raisina maharitra mandeha isan'andro .
Ankizy 5 ka hatramin'ny 8 eo ho eo
Ny Tibetan Terrier dia mitaky fikolokoloana be dia be ary tokony ho borosy isaky ny 2-3 andro hanesorana volo malalaka sy hisorohana ny fikorontanana. Aza kosehina palitao maina mihitsy izany amin'ny etona sy rano mba hanamorana ny fikosehana. Diniho bebe kokoa eo ambanin'ny tonon-tongotra, ny volombava ary ny aoriana. Ny alika dia tokony homena fandroana mahazatra - indray mandeha isan-kerinandro na roa. Esory ny volo be loatra avy amin'ny lalan'ny sofina. Atsipazo eo anelanelan'ny lamban'ny tongotra ny volon'ny volo rehetra. Raha tsy aseho ilay alika dia azo tapahina fohy, indrindra amin'ny fahavaratra. Na dia heverina ho tsy mandatsaka aza izy ireo dia mandatsaka isan-taona ihany fa tsy isan'andro. Ny Tibetan Terrier dia tsara ho an'ireo marary allergy rehefa voakarakara tsara ny palitao.
Ity dia karazan-jaza taloha izay nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny karazany Tibetana hafa, anisan'izany ny Shih-Tzu , Lhasa Apso , ary ny Spaniel Tibetana . Ny Teretana Tibetana dia tsy tena mpampihorohoro mihitsy. Tany am-boalohany dia notazonin'ireo moanina Tibetana efa ho 2000 taona lasa izay ary noheverina ho firma soa aman-tsara izy ireo. Tsy nety nivarotra azy ireo ireo moanina, fa matetika no nomeny fanomezana. Tamin'ny taona 1920, Dr. A.R.H. Greig avy any Angletera dia niasa ho an'ny Women Medical Services of India ary nomena ny roa amin'ireo alika ireo, ny iray nataon'ny marary noho ny nahavita fandidiana mahomby ary ny iray kosa nataon'ny Dalai Lama tenany. Dr. Greig dia nitombo ireo alika roa ireo ary nitondra ny telo tamin'izy ireo nody tany aminy izay nanohizany nanangona azy ireo, nanangana kennel Terrier Terrier any Angletera. Ireo alika dia nosoratana ho Lhasa Terriers tamin'ny voalohany. Tamin'ny 1930 dia nanova ny anaran'ilay karazany ho Tibetan Terrier ny Indian Kennel Club. Tamin'ny 1956 Dr. Henry sy Ramatoa Alice Murphy avy any Great Falls, Virginia, dia nanafatra ireo Teretana Tibetana voalohany tany Etazonia ary avy eo dia nampahafantarina azy ireo tamin'ny AKC tamin'ny 1973. Ny talenta sasany an'ny Tibetan Terrier dia misy: fankatoavana.
dane mahafinaritra afangaro amin'ny mastiff
Herding, vondrona tsy fanatanjahan-tena AKC
Samantha the Tibetan Terrier— 'Tia ny olona rehetra izy, na dia ny mpitsabo biby ary ny mpitaiza azy. Manana angovo betsaka izy ary mitazona antsika ho be atao, na dia 9 taona aza izy. '
Samantha the Tibetan Terrier amin'ny faha-9 taonany
Tompondakan'i Polonina Etruria Z Reksiowej Komajdówki, Sisi '- tompon'ny Magda Kruszewska, Polonina
Barney ilay Teratany Tibetana 6 volana tratra tamin'ilay fihetsika ! 'Tsia, Barney, inona no nataonao? !! Jereo ny nataon'ny Tibeter Terrier ahy tsk tsk tsk ... ary nanao ahoana ny fihetsiny? Nomeny tsiny daholo izany tamin'ny saka. '
Hijery ohatra misimisy momba ilay Teretana Tibetana
Tibetan Terrier Sary 1
Tibetan Terrier Sary 2
Tibetan Terrier Sary 3
Tibetan Terrier Sary 4
Alika Terrier Tibetana: Sarivongana Vintage azo angonina
pinscher kely sy ny pug Mix
min Pin weenie alika Mix
Terre boston 3 volana